Ndị na-emepụta China Dalteparin Sodium na ndị na-eweta ya | CSBIO
Heparin Sodium (Ọrịa ịba)
Aha Ngwaahịa: Dalteparin Sodium
Ike Ahịa: 3000kgs kwa afọ
Nkowa: BP / EP / USP
Ihe ngwugwu: 3kgs / tin
Dalteparin Sodium bụ otu ọgwụ ọgwụ a na-akpọ heparins dị obere molikula ma ọ bụ ọgwụ antithrombotics, nke na-enyere aka igbochi ịmepụta mkpụkọ ọbara site na ime ka ọbara ahụ dịkwuo ala.
• A na-eji Dalteparin Sodium agwọ ọrịa mkpụkọ ọbara (venous thromboembolism) na iji gbochie nlọghachị ha. Ọrịa thromboembolism nke Venous bụ ọnọdụ ebe ọgbụgba ọbara na-ebilite n'ụkwụ (olulu miri emi) ma ọ bụ akpa ume (akwara umeji), dịka mgbe a gbasịrị ya, izu ike ogologo oge ma ọ bụ na ndị ọrịa nwere ọrịa kansa ụfọdụ.
• A na-ejikwa Dalteparin Sodium na-agwọ ọnọdụ a maara dị ka ọrịa akwara na-ejighị n'aka. Ọrịa akwara ọbara na akwara akwara (akwara ọbara n'obi) na-egbu ma na-emechikwa site na idochi abụba.
• Ọrịa akwara akwara na-akwụghị chịm pụtara na ntakịrị ihe akwara akwara agbaala ọtọ ma kee ya akpụ, na-ebelata obara ọbara na-abanye n'obi. O nwere ike bụrụ na ndị ọrịa nwere ọnọdụ a nwere ike ịga n'ihu na nkụchi obi na-enweghị ọgwụgwọ na ọgwụ ndị na-agba ọbara dị ka Dalteparin Sodium.
Dalteparin sodium nwere akụrụngwa ịdị arọ nke kachasị mma, ma nwee ikike anticoagulant ma nchekwa. Ngwakọta mkpụrụ ndụ nke dalteparin sodium bụ ihe kachasị elebara anya, ọrụ antithrombotic bụ ihe siri ike, iberibe ọgwụ pere mpe na-ebelata, mkpokọta ọgwụ dị obere, mpempe polymer dị obere, ọnụego ya na platelet dị ala, ihe omume HIT dị ala, ihe ize ndụ ọbara ọgbụgba dịkwa obere.
Ọ dị mma maka iche iche ：
1. Dapaparin bụ naanị heparin dị ala dị obere nke US FDA kwadoro maka ndị agadi.
2. Dalteparin sodium bụ naanị heparin dị ala-molecule na-enweghị oke mmụba n’ebe ndị ọrịa nwere nsogbu akụrụ.
Nke gara aga: Enoxaparin Sodium
Osote: Enoxaparin Sodium Injection